KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
“Nantew sɛnea Yesu nantewee.”—1 Yohane 2:6, NET Bible.
YEHUI wɔ asɛm a edi kan no mu sɛ na Yesu wɔ akomatɔyam wɔ n’asetenam. Enti sɛ yɛn nso yɛpɛ sɛ yenya akomatɔyam a, ɛsɛ sɛ yesuasua no na yetie n’afotu.
Asɛm no ne sɛ, ɛno ara na Yehowa hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyɛ sɛnea Bible mu asɛm a ɛwɔ soro hɔ no ka no. Sɛ yebetumi atiatia Yesu anammɔn mu a, gye sɛ yesuasua n’abrabɔ na yɛde ne nkyerɛkyerɛ bɔ yɛn bra. Sɛ yɛyɛ saa a, Onyankopɔn begye yɛn atom, na ɛbɛma yɛanya akomatɔyam wɔ asetenam.
Nnyinasosɛm pii wɔ Yesu nkyerɛkyerɛ mu a ebetumi aboa yɛn ama yɛanantew sɛnea ɔnantewee no. Sɛ yɛkenkan Yesu Bepɔw so Asɛnka a ɛwɔ Bible mu no a, yebehu saa nnyinasosɛm no bi. Ma yɛmfa saa nnyinasosɛm no bi, na yɛnhwɛ sɛnea yebetumi de abɔ yɛn bra.
BIBLE NNYINASOSƐM: “Anigye ne wɔn a wonim wɔn honhom mu ahiade.”—Mateo 5:3.
SƐNEA NNYINASOSƐM YI BOA MA YENYA ASETENA A AKOMATƆYAM WOM:
Yesu ma yehui sɛ nyamesom wɔ yɛn mogya mu. Ɛwɔ nnipa komam sɛ yebehu nsɛm a edidi so yi: Adɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ nnipa baa wiase? Adɛn nti na amanehunu dɔɔso saa? Enti Onyankopɔn dwen yɛn ho ampa? Onipa wu a, ɔsan kɔtena baabi foforo anaa? Sɛ yebenya akomatɔyam a, gye sɛ yenya saa nsɛmmisa yi ho mmuae. Ná Yesu nim sɛ, sɛ yɛpɛ saa nsɛmmisa yi ho mmuae a, yɛrennya no baabiara sɛ Onyankopɔn Asɛm mu. Yesu bɔɔ n’Agya mpae sɛ: “W’asɛm yɛ nokware.” (Yohane 17:17) So Onyankopɔn Asɛm betumi ama yɛasom no ama yɛn ho atɔ yɛn?
ASƐM A ESII PAA:
Esa na na odi nnwontofo kuw bi a ɛwɔ din anim to dwom; baabi a ɔtoo dwom kodui no, na ne din adu akyiri. Ne nyinaa akyi no, na Esa ani nnye papa. Ɔka sɛ: “Ɛwom, na m’ani gye nnwonto no ho, nanso na m’anigye nwie pɛyɛ.” Nanso ankyɛ na Esa ne Yehowa Dansefo bi bɔɔ nkɔmmɔ. Esa ka sɛ: “Mibisabisaa no nsɛm pii! Sɛnea ɔde Bible yii ano no maa m’ani gyei, enti mepenee so sɛ ɔne me nsua Bible.” Nea Esa sua fii Bible mu no kaa ne koma, na enti ohyiraa ne ho so maa Yehowa. Ɔka sɛ: “Kan no, na minya asɛm da biara, nanso seesei de, manya akomatɔyam.” *
BIBLE NNYINASOSƐM: “Anigye ne mmɔborɔhunufo.”—Mateo 5:7.
Mmɔborɔhunu kyerɛ sɛ yebenya ayamhyehye ama nnipa; ɛkyerɛ sɛ yebeyi yɛn yam ama wɔn na yɛadwen wɔn ho. Yesu huu nkurɔfo a ade ahia wɔn mmɔbɔ. Ayamhyehye nti, Yesu yɛɛ biribi boaa wɔn a wɔrehu amane. (Mateo 14:14; 20:30-34) Sɛ yehu nnipa mmɔbɔ sɛnea Yesu yɛe no a, ɛma yenya akomatɔyam, efisɛ wɔn a wohu afoforo mmɔbɔ no, wɔn ani gye. (Asomafo Nnwuma 20:35) Yebetumi de yɛn anom asɛm ne yɛn nneyɛe akyerɛ sɛ yehu nnipa mmɔbɔ, na ɛno bɛma nnipa a wohia mmoa anya ahotɔ. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ yenya mmɔborɔhunu a, ɛma yɛn koma tɔ yɛn yam?
Maria ne ne kunu Carlos yɛ nnipa bi a wɔwɔ mmɔborɔhunu. Maria papa yere awu agyaw no, na nnansa yi de, waka dan mu. Maria ne Carlos akɔfa no abɛtena wɔn nkyɛn. Ɛtɔ da bi a, ne nti wɔnna anadwo. Sɛ n’asikreyare ba a, wɔnna, na ɛtɔ da bi mpo a, wotutu mmirika de no kɔ ayaresabea. Wɔka sɛ ɛtɔ mmere bi a wɔte nka sɛ wɔabrɛ yiye. Nanso wɔn ani gye efisɛ sɛnea Yesu kae no, wonim sɛ wɔreyɛ nea wobetumi nyinaa de aboa Maria papa, enti ɛma wonya akomatɔyam kɛse.
BIBLE NNYINASOSƐM: “Anigye ne wɔn a wɔpɛ asomdwoe.”—Mateo 5:9.
Yɛka sɛ obi pɛ asomdwoe a, nea ɛkyerɛ paa ne sɛ ɔyɛ “ɔpatafo.” Ɛbɛyɛ dɛn na obi a ɔyɛ ɔpatafo anaa asomdwoe nipa anya akomatɔyam? Ade biako a ɛwom ne sɛ ɛma yɛne nkurɔfo ntam yɛ papa. Ɛsɛ sɛ yetie Bible afotu a edi so yi: “Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, mo fam de, mo ne nnipa nyinaa ntena asomdwoe mu.” (Romafo 12:18) Saa “nnipa nyinaa” no, yɛn abusuafo ne afoforo a wɔne yɛn gyidi nhyia no ka ho bi. Enti wunnye nni sɛ, sɛ yɛne “nnipa nyinaa” tena asomdwoe mu a, ɛbɛma yɛanya akomatɔyam ampa?
Ma yɛnhwɛ ɔbea bi a wɔfrɛ no Nair asɛm. Nsɛm pii atoto no a anka ebetumi asɛe ɔne afoforo ntam asomdwoe, titiriw n’abusuafo. Ne kunu agyaa no bɛyɛ mfe 15 ni, na efi saa bere no, ɔno nko ara na ɔretete ne mma. Ná ne mmabarima no biako nom nnubɔne, na ɛtɔ da bi a wupua no a, empua; edu baabi a, otumi hunahuna ne maame ne ne nuabea mpo. Nair gye di sɛ ɔhaw akɛse a atoto no nyinaa mu no, nea osua fii Bible mu na aboa no ama wayɛ asomdwoe nipa. Ɔbɔ ne ho mmɔden sɛnea ɛbɛyɛ a ɔne obiara nnye akyinnye anaa ɔne no nko biribiara ho. Ɔyere ne ho yɛ nkurɔfo adɔe, ohu wɔn mmɔbɔ na onya wɔn ho abotare. (Efesofo 4:31, 32) Ogye di yiye paa sɛ asomdwoe a ɛwɔ ne ho nti na otumi ne n’abusuafo ne nnipa foforo tena asomdwoe mu no.
DWEN DAAKYE HO
Sɛ yɛde Yesu afotu pa no yɛ adwuma a, yebenya anigye ne akomatɔyam wɔ yɛn asetenam. Nanso sɛ yebenya akomatɔyam paa a, ade biako bi nso wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yehu; ɛno ne nea ɛbɛba daakye. Sɛ nea yenim ara ne sɛ yebenyin, yɛbɛyare na yɛawu a, anka akomatɔyam bɛn na ɛwom? Ɛnnɛ wiase yi mu de, ɛno ara na ɛda hɔ ma yɛn.
Nanso anidaso wɔ hɔ. Wɔn a wɔnantew “sɛnea Yesu nantewee” no, Yehowa behyira wɔn pii. Yehowa ahyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ, ɔde wiase foforo a trenee te mu bɛba. Saa bere no, nnipa betie Yehowa asɛm na wɔanya apɔwmuden atena ase daa sɛnea Yehowa bɔɔ ne tirim no. N’Asɛm ka sɛ: “Hwɛ! Onyankopɔn ntamadan wɔ adesamma mu, na ɔne wɔn bɛtena na wɔayɛ ne man. Na Onyankopɔn ankasa ne wɔn bɛtena. Na ɔbɛpopa wɔn aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio. Kan nneɛma no atwam.”—Adiyisɛm 21:3, 4.
Ɔbaapanyin Maria adi mfe 84, na yɛkaa ne ho asɛm wɔ asɛm a edi kan no mu; ose ɔretwɛn da a saa asɛm no bɛba mu no denneennen. Wo nso ɛ? “Nkwa ankasa” a Onyankopɔn Ahenni de bɛba no, wopɛ sɛ wuhu ɛho nsɛm pii anaa? (1 Timoteo 6:19) Ɛte saa a, wubetumi ne Yehowa Adansefo a wɔwɔ wo mpɔtam no adi nkitaho anaa woakyerɛw wɔn a wotintim nhoma yi. *
^ nky. 8 Wubetumi akenkan Esa asɛm no nyinaa wɔ ha; asɛmti a ɛda so ne, “Bible Tumi Sesa Nnipa—Mihui sɛ Me Suban Nyɛ Fɛ Koraa”.
^ nky. 18 Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nhoma no aboa nnipa pii ama wɔate Bible mu nsɛm ase. Yehowa Adansefo na wotintimii.
Share Share Wopɛ Akomatɔyam?—Hwɛ Yesu Sua No